Ivhu (ndima yenyika) - Wikipedia
Ivhu (ndima yenyika)
Shoko rokuti ivhu (earth, soil, clay) rinoreva chikamu kana kuti ndima yenyika. Ndima yenyika iyi inokwanisa kunge iri kushandiswa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira: kurima, mugodhi, kuvaka musha, kuvaka guta, kuvaka mugwagwa zvichingodaro.
Nyaya yevhu kana kuti yeminda yakatanga kare pakauya varungu muno kuma 1890. Varungu vakanga vauya muZimbabwe vachitsvaga goridhe, asi pavakazoona kuti goridhe rakanga risingangowanikwe pese-pese sezvavaifunga, vakabva vatanga kuita chipata-pata kutora nzvimbo dzekurima nekuchengetera mombe. Kambani yeBSA yakaita kuti zvive nyore kuti varungu vawane minda, uye haina kumboita han’ya nekodzero dzevanhu vatema vakanga vari varidzi venzvimbo dzaitorwa idzi.
Mushure mekurwisana kwevanhu vatema nevarungu muna 1893 na1896/7, vanhu vatema vakakundwa zvekuti varungu ndivo vakanga vave nesimba rese. Vakabva vabvisa vanhu munzvimbo dzakanaka, vachivaisa mumaruzevha ane ivhu risina kunaka. Vadaro, vakabva vatanga kubhadharisa vanhu vatema miripo yevhu ravo. Izvi zvakakonzera kuti vanhu vatema vatsvage basa kuvarungu avo vaivadzvinyirira vachivapa mari shoma.
Chigurwa chenyika (parcel of land).
Rupande rwemunda (part of a field).
Mumakore ekurwa hondo yerusununguko vanhu vakanga vaine chinangwa chokudzora kuvanhu vatema, ivhu remadzitateguru avo.
Kutanga gore 1997 Zimbabwe yakange yosimudzira kutaura nhau yokuti, ivhu kuvanhu.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivhu_(ndima_yenyika)&oldid=70194"
This page was last edited on 19 Ndira 2020, at 21:41.